तीन दिने मन्टेश्वरी तालिम सुरु
२ असार । बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ता र प्राथामिक तहका शिक्षकहरुको लागि तीन दिने मन्टेश्वरी तालिम आजदेखि सुरु भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ को सहयोगमा शिव माध्यामीक विद्यालय धुलियाविटको आयोजनामा उक्त तालिम सुरु भएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरुमा मन्टेश्वरी विधिबाट शिक्षण सिकाईलाई अघि…
एउटा बच्चा आफ्ना आमाबाबुको मृत्यु भएको चार बर्षपछि जन्मिएला ? यसो भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर यो चीनको सत्य घटना हो । चिनीयाँ मिडियाका अनुसार बच्चा जन्मिदा आमाबाबुको एउटा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको थियो । सन् २०१३ मा मृत्यु भएका ती दम्पत्तीले…
मुसीकोटमा भेटिए ६ जना बालश्रमिक
२९ जेठ । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोट स्थित खलंगा बजारमा ६ जना बालश्रमिकहरु फेला परेका छन् । बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंगलबार जिल्ला बालकल्याण समिति र मुसीकोट नगरपालिकाको आयोजनामा बालश्रमको अनुगमन गर्दा होटेलमा काम गर्ने ३ जना र गाडी मर्मत सेन्टरमा काम गर्ने…
२८ जेठ । १२ वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विश्वराम रनपहेँलीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । यो फैसलाले न्यायको लागि संघर्षरत बालिकाकी आमा सन्तोषी नेपालीले केही राहतको सास फेरेकी छन् । तर, १३ महिनादेखि शिक्षण अस्पतालमा रहेको छोरीको शव…
चट्याङ लागेर २ विद्यार्थीको मृत्यु पाँच घाइते
२७ जेठ । आइतवार दिउसो चट्याङ लागेर २ जना विद्यार्थिको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नम्वर ४ सुर्खेतको धनपानी प्राविमा अध्ययनरत विद्यार्थिहरुको मृत्यु भएको हो । यसै विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययनरत ६ वर्षिया निर्मला…
नायिका रेखाले किन गरिन् आरक्षणको विरोध ? भनिन्–‘बालविवाह गराईदिने आमाबाबु अपराधि हुन्’
२५ जेठ । नायिका रेखा थापा पछिल्लो समय फिल्म भन्दा पनि एउटा महाअभियानमा जुटेकी छन् । समाजका कुरीति र गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा फिल्म खेल्ने र निर्माण गरीरहेकि रेखा छोरीका लागी स्वर्णीम अभियानमा देशका विभिन्न ठांउमा पुगिरहेकी छन् । यहि अभियान अन्तर्गत सुर्खेतका बिभिन्न विद्यालयका…
देश शान्ती र स्थिरता तर्फ अघि बढ्यो : प्रधानमन्त्री
२४ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्ती र स्थिरता तर्फको यात्रामा अगाडि बढेको बताएका छन् । स्थानीयतह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर नयाँ सरकारहरु पनि गठन भइसकेकोले अवस्थामा नेपाल स्थिरता तर्फ बढेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (युनिसेफ)…
सिराहमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बालिकालाई विद्यालय भर्ना
५ बैशाख । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिरहाका दुई जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । सिराहाको रामदुलारी मावि कल्याणपुर नपा ११ मा सोही ठाउ“का दिनेश कुमार र कौशिला देवी मण्डल (खत्वे) की…
एम्बुलेन्स खरिदका लागी कविता कन्सर्ट
२८ चैत्र । अनमोल स्मृति प्रतिष्ठान सुर्खेतले एम्बुलेन्स खरिदका लागी कर्णाली कविता कन्सर्टको आयोजना गर्ने भएको छ । २०७५ बैशाख १८ गते उक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको हो । कन्सर्टमा कविता वाचनका लागी कवि नवराज पराजुली सुर्खेत आउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति…
शान्ति बाल पुस्तकालयको स्थापना
१७ चैत । सुर्खेतको बराहतालमा शान्ति बाल पुस्तकालयको स्थापना भएको छ । बराहताल गाउँपालिका ८ कुनाथरी स्थित सरस्वती आधारभुत विद्यालयमा गौतमराज अधिकारी र प्रेम क्षेत्रीको पहलमा स्थापित पुस्तकालयको शनिबार उद्घाटन गरिएको हो । ५ हजार पुस्तक राख्ने योजना गरिएको उक्त पुस्तकालयमा करिब १३…